१७ देशका 'विजनेश लिडर'हरु आउने सिईओ समिटमा तपाईंपनि सहभागी हुने कि ? यसरी गर्नुहोस् नाम दर्ता !
ARCHIVE, MUDRA MAMILA » १७ देशका 'विजनेश लिडर'हरु आउने सिईओ समिटमा तपाईंपनि सहभागी हुने कि ? यसरी गर्नुहोस् नाम दर्ता !
काठमाडौँ- नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको सिईओ समिट तथा अवार्ड कार्यक्रममा १७ देशका झण्डै ३०० जना सिईओ तथा विजनेश लिडरहरुको भेट हुने भएको छ । आउने फागुन ३० गते काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको नेपाल सिईओ समिट तथा अवार्ड कार्यक्रम मुख्यतया दुईवटा मुद्धा (एजेण्डा) मा केन्द्रित हुनेछ । बदलिंदो राजनीतिक परिस्थितिमा अब बन्ने सरकारका आर्थिक मुद्धाहरु के हुन्छन भन्ने कुरा समिटको पहिलो विषय हो । समिटमा ठूला र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सफल सिईओहरु र नेतृत्वकर्ताहरुले व्यवसाय संचालन तथा व्यवस्थापनमा कस्ता तौरतरिका अपनाएका छन र यो अवस्था सम्म आउन उनीहरुले के कस्ता प्रयास गरे भन्ने विषयमा समेत छलफल, बहस र अनुभव आदान प्रदान हुनेछ ।
उक्त समिट तथा अवार्डमा सहभागी हुन चाहने विभिन्न कम्पनीका सिईओ, चेयरपर्सन, डाइरेक्टर तथा म्यानेजिङ डाइरेक्टरहरुले यही फागुन ८ गते अर्थात फेब्रुअरी २० सम्म https://nepalceosummit.com/ मा गई अनलाईन आवेदन फर्म भर्न सक्नेछन । विगतको दश बर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, हालसालैको भुकम्प र त्यसपछिको नाबाबन्दिले देश आक्रान्त बन्यो । बेला बेलामा गरिने बन्दहडताल तथा चक्काजाम देश समुन्नत बन्न नसक्नुको अर्को कारण बन्यो । यि र यस्ता अन्य कैयौं बाधाका कारण देशले प्रगतिको बाटो रोज्न सकेन, देशको सर्वाङ्गिण विकास हुन सकेन । हामीकहाँ राजनीतिक उतार चढावहरु मात्रै भए । आर्थिक तथा सामाजिक विकासले गति लिन पाएन ।
तर अब समय फेरिएको छ, जताततै आशाका किरणहरु पलाएका छन । तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई नतिजा आइसकेको छ । यससँगै देशले नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा अर्को फड्को मारेको छ । नयाँ जनादेश सहितको सरकार बन्ने प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुँदैछ ।
नयाँ सरकारका सामाजिक र आर्थिक मुद्धा (एजेण्डा) के हुनेछन ? देश निर्माणका लागि कस्तो दृष्टिकोण सहितका योजनाहरु बन्नेछन ? यसको सफल कार्यान्वयनका लागि कस्ता रणनीतिहरुको तर्जुमा गरिनेछ र कस्ता टुल्स र टेक्निकको सहायताले आगामी ५, १० र २० बर्षमा नेपाल कहाँ पुग्नेछ भन्ने विषयमा समिट केन्द्रित हुनेछ ।
समिटमा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उद्योगमन्त्री, वाणिज्यमन्त्री तथा यो क्षेत्रका विज्ञ विषेशज्ञ सहित सरोकारवालाहरुको सक्रिय सहभागिता रहनेछ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीका लगानीकर्ताहरु र कार्यकारी तथा नेतृत्वदायि भूमिका निभाउनेहरु सहित झण्डै ३०० जना विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका सिईओ र विजनेश लिडरहरु बीच खुला छलफल, बहस र अन्तरक्रिया गर्नु समिटको मुख्य लक्ष्य हो ।
अनि ठूला र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सफताका सुत्रहरु के हुन । व्यवसाय हाक्ने कार्यकारी र नेतृत्वले कम्पनी संचालन गर्ने तौरतरिका कस्ता छन भन्ने कुरा सहभागीहरुबीच बाँडिनेछ । सफल नेतृत्वकर्तामा हुनुपर्ने व्यवस्थापकीय कौशल र विश्वव्यापी अभ्यास तथा चुनौती बारेमा समेत समिटमा छलफल हुनेछ । समयको सही सदुपयोग र बाहिरी दुनियाँसँगको सम्बन्ध (पिआर), ब्रान्ड, मानवीय संशाधन, सिएसआर व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा काम गरिरहेकहरुको अनुभव समेत सुन्न पाइनेछ, उनीहरुसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सकिनेछ । साथै नयाँ नयाँ सोच (आईडिया) को आदान प्रदान गर्दै कम्पनी र त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिको उन्नती र प्रगति कसरी गर्ने भन्ने विषय वरिपरि समिट केन्द्रित रहनेछ । समिटको आयोजना पद्मा मिडिया ग्रुप अन्तरगत संचालित विजनेश प्लस टेलिभिजन र सिईओ क्लबले गर्दैछन ।
अर्थ सरोकार डटकम कार्यक्रमको मिडिया सपोर्टरको रुपमा रहेको छ ।